Ny Trano Fisakafoanana Toeram-pisakafoanana miova fo ny tetikasa ka misy rihana telo ao Nanjing, mirefy 2km eo ho eo ny iray. Ankoatra ny sakafo sy ny fivoriana dia misy ny kolontsaina dite sy ny kolontsaina divay. Ny firavaka dia mampifamatotra sinoa vaovao marisika hatreo am-bavany ka hatreny am-pamolavolana vato. Ny valindrihana dia voaravaka amin'ny bracket sy tafo taloha sinoa. Mamolavola singa lehibe indrindra amin'ny famolavolana eo amin'ny valaly. Fitaovana toy ny vovo-jiro, vy vita amin'ny vy, ary sary hosodoko misy fahatsapan'ny Shinoa vaovao dia mifangaro mba hamoronana habaka vaovao mahatsapa.
Ny Satroka Bisikileta
Ny Satroka Bisikileta Ny fiarovan-doha dia aingam-panahy avy amin'ny endrika 3D Voronoi izay miparitaka be amin'ny Natiora. Miaraka amin'ny teknika sy bionika paramétika, ny fiarovan-dàlana amin'ny bisikileta dia manatsara ny rafitra mekanika ivelany. Io & # 039; s hafa noho ny rafitry ny fiarovana amin'ny flake nentim-paharazana amin'ny rafitra mekanika 3D bionika 3D tsy misy soratra. Rehefa tratran'ny hery ivelany, io rafitr'asa io dia mampiseho fitoniana tsara kokoa. Amin'ny fandanjalanjana ny fahazavana sy ny fiarovana, ny fiarovan-doha dia mikendry ny hanome ny olona ny fiarovan-tena amin'ny fiarovan-tena amin'ny fiarovan-tena amin'ny fiarovan-tena.
Ny Fisakafoanana Sy Ny Fiasana
Alatsinainy 25 Oktobra 2021
Ny Fisakafoanana Sy Ny Fiasana Ny olombelona rehetra dia manan-jo hifandray amin'ny ora sy ny fahatsiarovana. Ny teny hoe Eatime dia toy ny fotoana amin'ny teny sinoa. Ny sehatra eatime dia manome toerana hanentanana ny olona hihinana, hiasa ary hitadidy am-pilaminana. Ny foto-kevitra momba ny fotoana dia mifandray akaiky amin'ny atrikasa, izay niatrika fiovana rehefa nandeha ny fotoana. Miorina amin'ny fomba atrik'asa, ny firafitra dia misy ny firafitry ny indostria sy ny tontolo iainana ho singa fototra hanamboarana toerana. Eatime dia mankasitraka ny endrika faran'izay madio indrindra amin'ny alàlan'ny fanaingoana ireo singa manolotra ny tenany ho an'ny haingon-tsakafo efa simba sy vita.
Ny Maha-Marika Ny Marika Siozen dia mampiditra rafitra vaovao momba ny fahadiovana ambaratonga vaovao momba ny fahadiovan'ny revolisiona, izay manova ny faritra manodidina anao, ny tanana ary ny rivotra ao anaty rafi-piarovana mikraoba / poizina misy poizina. Ny fomba fanamboarana maoderina dia tsara amin'ny fanomezana antsika fahombiazana sy fampiononana angovo tsara kokoa, saingy amin'ny vidiny izany. Ny tranobe marefo sy tsy misy drafitra dia mandray anjara amin'ny fananganana mpandoto betsaka tsy tambo isaina. Na dia ny rafitry ny fantsom-bolan'ny trano dia voalamina tsara sy voatahiry tsara, dia mbola mitoetra ho olana goavana ny fandotoana ao anaty trano. Ilaina ny fomba vaovao.
Ny Sary Kanto
Asabotsy 23 Oktobra 2021
Ny Sary Kanto Paris nanadino dia sarina mainty sy fotsy ny sary taloha taloha an-drenivohitra frantsay. Ity endrika endrika ity dia famolavolana toerana tsy fantatry ny olona satria tsy ara-dalàna ary sarotra idirana. Matthieu Bouvier no nitady ireo toerana mampidi-doza nandritra ny folo taona mba hahitana ity lasa adino ity.
Zoma 22 Oktobra 2021
Kitapo Tote Kitapo trafika fanolorana aingam-panahy, ho enti-mora mora, indrindra mandritra ireo andro be atao miantsena na mandeha amin'ny asa fivarotana. Ny fahita kitapo Tote dia toy ny tendrombohitra ary afaka mitazona na mitondra zavatra maro. Ny taolana oracle dia mandrafitra ny rafitry ny kitapo, ny sarintany sarimihetsika topografika ho fitaovana arahin'antoka toy ny tampon'ny tendrombohitra tsy miova.
Only Right Here Tompona Antsy Alarobia 8 Desambra
180º North East Tantara Talata 7 Desambra
Ballo Fitaterana Alatsinainy 6 Desambra
Ny Trano Fisakafoanana Ny Satroka Bisikileta Ny Fisakafoanana Sy Ny Fiasana Ny Maha-Marika Ny Marika Ny Sary Kanto Kitapo Tote